Shina tsindrio hidin-trano visy mpamokatra sy mpamatsy | Karlter
Warranty ho an'ny fonenana mihoatra ny 10 taona, ho an'ny varotra mihoatra ny 6 taona
Style Design voan-kazo
Toerana niandohana Shanghai, Sina
Anaran'ny marika tsy misy
Fitsaboana ambonin'ny tany embossing lalina, tanana vonoina
Karazana vokatra Vinyl Flooring
Anaran'ny vokatra Flory Vinyl Luxry
endri-javatra Anti-slip fanoherana fanoherana rano
hateviny 4.0mm / 4.5mm / 5.0mmmm
Manaova Layer 0.3mm / 0.5mm
OEM Ekeo ny Oem
Teny lakile Product Vinyl Spc Plank
Akora Virijiny PVC Vinyl
Fahafaha-mamatsy: 300000 metatra toradroa / metatra toradroa isam-bolana
Ny vatan-kazo vita amin'ny visy dia ny fiarovana ny tontolo iainana maitso ho an'ny haingon-trano vaovao, izy io dia natsangana tamin'ny alàlan'ny rafitra maro sosona natampina, amin'ny ankapobeny dia misy ny sosona fanoherana fanoherana polymer (ao anatin'izany ny fitsaboana UV), ny fanonta sarimihetsika sarimihetsika, sosona fibre vera, sns. Amin'izao fotoana izao, misy karazany telo ny lamosina miaraka amin'ny lamosina maina, lay malalaka ary rafitra fanindriana.
Inona no atao hoe Click LVT?
Na dia misy karazana fananganana sosona mitovy amin'ny lakaoly aza izy io dia tsindrio ny gorodona LVT fa misy tsy fitovizany. Satria mila mampiditra rafi-tsindry izy, ho hitanao fa ireo karazana gorodona ireo dia mazàna matevina kokoa noho ireo karazana lakaoly midina. Na izany aza, tsy voatery hahatonga azy ireo haharitra kokoa izany. Ny soson'akanjo mitafy dia matetika mitovy amin'ny tsindry roa sy lakaoly midina LVT.
Ny fizotry ny fametrahana dia vita mora noho ny rafitra kitika tafiditra ao. Ny marika isan-karazany dia manana ny rafitry ny tsindry azy ireo ary mamela anao hanindry fotsiny ny taila ho amin'ny toerany. Midika izany fa mazàna ianao dia afaka mifanaraka amin'ny tany fa tsy mandoa matihanina hanao izany ho anao. Raha tokony apetaho eo ambonin'ilay tany ambany io dia mahazatra ny mampiasa underlay miaraka amin'ny tsindrio LVT. Izany dia mampiroborobo ny fampiononana ny gorodona, ary koa ny fampihenana ny habetsaky ny asa ilainao hatao amin'ny tany ambanin'ny tany.
Ny tombony lehibe amin'ny tsindrio LVT dia misy
• Haingana sy mora apetraka
• Famolavolana matevina kokoa mahatonga azy ireo hahatsapa toy ny gorodona hazo
• Mahazo aina kokoa ambanin'ny tongotra
Ny fizotry ny fametrahana haingana sy mora dia iray amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ity karazana gorodona ity. Midika izany fa afaka manao izany ianao, mamonjy vola amin'ny fametrahana azy.
Teo aloha: 12.0mm laminate gorodona
Manaraka: EIR SPC gorodona vita amin'ny vinina